Yan Aung: စားသုံးသူများ...
ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက် ပန်းခြံတစ်ခုထဲတွင် သူ၏ ဖခင်နှင့် အတူတူထိုင်နေရင်း ချောကလက်တစ်တောင့်ကို နှစ်ခြိုက်စွာ ကိုက်စားနေခဲ့သည်။
ပန်းပွင့်ငယ်လေးများအနီးတွင် လူးလာပျံသန်းနေသော လိပ်ပြာငယ်လေးများကို ကြည့်လိုက်၊ ဘာသာဘာဝ တွန်ကျူးနေကြသော ငှက်ငယ်လေးများ၏ တေးဆိုသံများကို နားဆင်လိုက်၊ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ပြေးလွှားဆော့ကစားလိုက်ဖြင့် သာယာအေးချမ်းသော ညနေခင်းတွင် စီးမျောနေခဲ့သည်။
ကစားပြီးနောက် ဒန်းစင်လေးတစ်ခုပေါ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ထိုင်နေစဉ် သူ၏ရှေ့တွင် တွန့်လိန်တွန့်လိန်ဖြင့် သွားနေသော အကောင်လေးတစ်ကောင်ကို သူတွေ့ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့သည်။
“အဲဒါ ဘာကောင်လေးလဲ ဖေဖေ”
“တီကောင်လို့ခေါ်တယ် သားရဲ့. မြေကြီးထဲမှာနေတာလေ…”
သားငယ်၏ ချစ်စဖွယ် ဟန်ပန်မူရာဖြင့် လုပ်ပြနေသောပုံစံကို ကြည့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူမှာ တဟားဟား အော်ရယ်နေခဲ့လေသည်။
ထိုအခိုက်အတန့်မှာပင် ကလေးငယ်ရှေ့တွင် လိမ်တွန့်လိမ်တွန့်ဖြင့် သွားနေသော တီကောင်ငယ်လေးကို ငှက်ကလေးတစ်ကောင်က ဆတ်ခနဲ ထိုးဆိတ်ပြီး စားသောက်လိုက်လေသည်။
“ဖေဖေ. ဟိုကောင်ကောင်ကြီးကို ငှက်ကလေးက စားပစ်လိုက်ပြီ.”
ကလေးငယ်က ဖခင်ဖြစ်သူကို လက်တို့ပြီးပြောသည်။
“အေးပေါ့သားရဲ့. တီကောင်ဆိုတာ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အစာပဲလေ.”
“ငှက်ကလေးတွေက ဘာလို့ ရွံစရာကောင်းတဲ့ တီကောင်ကို စားတာလဲဟင်. ချောကလက်က ဒီလောက်စားလို့ကောင်းတဲ့ဟာကို….”
ဖခင်ဖြစ်သူက သားငယ်လေး၏ နဖူးလေးကို ညင်သာစွာ နမ်းရှိုက်ခဲ့လိုက်ရင်း…
“သားရယ်. တီကောင်လေးတွေက ငှက်လေးတွေရဲ့ အစာလေ. ချောကလက်ကတော့ လူရဲ့ အစာပေါ့. ကိုယ့်အစာကိုယ်ပဲ စားရတယ် သားရဲ့…”
ကလေးငယ်လေး ကြီးပြင်း၍ လူလားမြောက်လာခဲ့ကာ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူဖြတ်သန်းရာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် ငှက်ကို ချောကလက်ကျွေးသူများတွေ့ရသလို လူကို တီကောင်ကျွေးသူများနှင့်လည်း မကြာခဏကြုံကြိုက်လာခဲ့ရသည်။
ငှက်သည် ချောကလက်ကို မစားဘဲ ငြင်းဆိုနိုင်သော်လည်း တစ်ချို့လူများသည်ကား တီကောင်ကို မငြင်းပယ်နိုင်ဘဲ စားနေကြရသည်ကို သူသိလာရသည်။
တစ်နေ့တွင် ပန်းသီးကြွေကျခဲ့ဖူးသော သစ်ပင်အောက်၌ လူငယ်လေးတစ်ယောက်တည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေခဲ့ရင်း သဘာဝမကျသော၊ မတရားသော လောကကြီးအကြောင်းကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားနေခဲ့မိ၏။
သုိ့သော် လူသည် ငှက်ကို စားနိုင်၏။
ချောကလက်သည် လူကို မစားနိုင်ပါ.
သို့သော် လူသည် ချောကလက်ကို စားနိုင်၏.
လူသည် အရာရာကို စားသောက်နိုင်စွမ်းရှိ၍ လူသည် တန်ခိုးအင်အားကြီးမားသော သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ဖြစ်၏။
လူသည် တီကောင်ကို စားနိုင်၏.
တီကောင်သည် လူကို မစားနိုင်ပါ.
သို့သော် တီကောင်သည် လူသေ၍ မြေကြီးဖြစ်သွားသော အခါတွင်ကား လူကို ပြန်စားနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ထိုနည်းတူစွာပင် ငှက်သည် လင်းတသာ ဖြစ်ခဲ့လျှင် လူသေကို စားသောက်နိုင်စွမ်းရှိ၏…
ကျွန်ုပ် တီကောင်ကိုမကြိုက်. လင်းတငှက်ကိုလည်း မနှစ်မြို့နိုင်ပါ.
တီကောင်စားခံရမည်ကိုလည်း မခံလို. လင်းတနားခံရမည်ကိုလည်း မကြံလိုပါ.
(ရှေ့ဆက်မည့်စကားများတွင် လင်းတငှက်ကို ခေတ္တဘေးဖယ်၍ ရေးသွားမည်. သဘောတရားကား အတူတူပင် ဖြစ်၏. သိလိုက တီကောင်နေရာတွင် လင်းတငှက်ကို အစားသွင်း၍ ဖတ်ပါလေ...)
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ရှင်သန်နေရန် ကြိုးစားလို၏…
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်၏ ခန္ဒာကိုယ်ကို တီကောင်များ လာစားကြပေလိမ့်ဦးမည်.
လူသေလျှင် တီကောင်များ လာစားကြမည့်အတူတူ လူမသေခင်ကတည်းက တီကောင်များကို မျိုးပြုန်းအောင် စားထားလျှင် ကောင်းမည်ဟု မိုက်ရူးရဲဆန်စွာ တွေးမိ၏။
တီကောင်သည် လူ၏ အစာမဟုတ်. ငှက်၏ အစာဖြစ်သည်။
လူသည် တီကောင်ကိုမစားနိုင်. ငှက်သည်သာ တီကောင်ကို စားနိုင်၏.
ထို့ကြောင့် တီကောင်ကိုစားနိုင်ရန် လူသည် ငှက်ဖြစ်သင့်၏..
လူသည် ငှက်ဖြစ်သော် တီကောင်ကို စားနိုင်မည် မှန်သော်လည်း ငှက်သည် လူ၏ အစာဖြစ်သောကြောင့် လူသည် ငှက်ကို စားပေလိမ့်ဦးမည်.
ထို့ကြောင့် တီကောင်ကိုစားရန်အတွက် လူမှ ငှက်ဘ၀သို့ ပြောင်းထားသော ကျွန်ုပ်သည် လူစင်စစ်များ၏ စားသောက်ခြင်းကို မခံရနိုင်ရန်အတွက် တီကောင်များကို စားသောက်ပြီးသည်နှင့် ငှက်မှ လူအဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းရပေလိမ့်ဦးမည်….
ငှက်မှ လူအဖြစ်သို့ မပြောင်းမီ လူ၏အစားခံရခြင်းနှင့် လူမှငှက်အဖြစ်သို့ မပြောင်းမီ တီကောင်၏အစားခံရခြင်းပင် ဖြစ်သည်….
အကယ်၍များ သင်သည် တီကောင်ဘ၀တွင်ရှိစဉ် ငှက်တစ်ကောင်ကောင်မှ လာရောက်ထိုးသုတ်မည်ရှိသော် လူအသွင်သို့ ချက်ချင်းပြန်ပြောင်းနိုင်လျှင် (သို့မဟုတ်) လူအသွင် ဟန်ဆောင်ပြနိုင်လျှင် ငှက်သည်နောက်ဆုတ်ရပေလိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် သင်သည် ငှက်ဘ၀တွင်ရှိစဉ် လူတစ်ယောက်ယောက်မှ လာရောက်ဖမ်းဆီး စားသောက်မည်ရှိသော် လူအသွင်သို့ ချက်ချင်းပြန်ပြောင်းနိုင်လျှင် (သို့မဟုတ်) လူအသွင် ဟန်ဆောင်ပြနိုင်လျှင် လူသည် နောက်ဆုတ်ရပေလိမ့်မည်။
အလားတူ သင်သည် လူသေဘ၀တွင် ရှိစဉ် တီကောင်တစ်ကောင်ကောင်မှ လာရောက် စားသောက်မည်ရှိသော် ငှက်အသွင် (သို့မဟုတ်) လူအရှင်အသွင် ဟန်ဆောင်ပြနိုင်လျှင် တီကောင်သည် နောက်ဆုတ်ရပေလိမ့်မည်။
သီအိုရီ (၃) ခုလုံးတွင် တူညီသော အချက်တစ်ချက်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရလေသည်။ ထိုအရာကား လူယောင်ဖန်ဆင်းပြနိုင်လျှင် အရာရာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
သို့သော် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသေး၏။
(၁) သင်သည် လူရှင်ဖြစ်ရန်လိုသည်။
(၂) လူလူချင်းကိုမကြောက်တတ်သော လူရှင်ဖြစ်ရန်လိုသည်။
(၃) လူပုံပေါက်သော၊ လူပီသသော လူရှင်ဖြစ်ရန်လိုသည်။
ဤနေရာတွင် “လူရှင်” ဟူသော ဝေါဟာရကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ရန် လိုလာပြန်သည်။
“လူရှင်” ဟူသည် ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေသော လူကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်သန်လှုပ်ရှားသည် ဆိုရာဝယ် အသက်ရှင်သန်နေရုံမတ္တမျှကို မဆိုလို၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်း၊ အသိအမြင်ပိုင်းတွင်ပါ ရှင်သန်ကြီးထွားနေသော လူကို ဆိုလိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လူတော်တော်များများသည် အသက်မသေရုံ ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေကြကာ ဘ၀ခရီးကို ဆက်နေကြလေသည်။
အတွေးအခေါ်ပိုင်း၊ အသိအမြင်ပိုင်း ရှင်သန်ကြီးထွားစေရန် မြေတောင်မြှောက်ပျိုးထောင်ကြသူ အနည်းငယ်သာ ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် လူတော်တော်များများသည် လူသေများဖြစ်နေကြသည်။
သို့သော် လူသေအများစုသည် လူရှင်အနည်းငယ်ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြ၏။
ထို့ကြောင့် လူရှင်များသည် လူသေများ၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို ခံရကာ လူရှင်သည် လူသေယောင် ဆောင်ကြရပြန်သည်။
ဤတွင် ဟန်ဆောင်ခြင်း သီအိုရီသည် လှပစွာ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့လေတော့သတည်း….
တစ်စုံတစ်ရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်နားလည်သွားသော လူငယ်လေးသည် နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးလိုက်ခဲ့ရင်းက ကြွေကျလာသော ပန်းသီးတစ်လုံးကို ကြွပ်ခနဲ ကိုက်စားလိုက်ခဲ့လေသည်။
သို့သော် သူကိုက်လိုက်သော ပန်းသီးသည် ပိုးထိုးထားသော ပန်းသီးပုပ်တစ်လုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် ပန်းသီးနှင့်အတူ ပိုးလောက်လန်းတစ်ကောင်ကိုပါ ကိုက်စားမိနေသည်ကို သိလိုက်ရသည့်အခိုက်အတန့်တွင်မတော့ သူသည် သေချင်စော်နံလောက်အောင်ပင် စိတ်ပျက်သွားနေခဲ့တော့သည်။
ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကောင်းကောင်းလာလိုက်တာ... တကယ်ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ
ပန်းသီးကို ဘို စတိုင်နဲ့ ကိုက်စားလို့ နေမှာ။ဗမာစတိုင်နဲ့ဓားနဲ့ ခွဲ ပြီးစားရင်ပိုးကောင်မစား